Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डडेल्धुरामा एकिकृत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन – Emountain TV
डडेल्धुरामा एकिकृत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन
डडेल्धुरा, १ फाल्गुन ।
डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले एकिकृत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ । गाउँपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा संचालन गरेपछि स्थानीय लाभनन्वित भएका छन् । गाउँमै उपचार सेवा पाएपछि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयको भनाई छ ।
नवदुर्गा गाउँपालिकाले शिविरमा जनरल स्वास्थ्य जाँच, जेष्ठ नागरिकको आखाँ, महिलाको पाठेघर, दन्त उपचार, प्रयोगशाला, फामेर्सि, युएसजि लगायतका सेवा निःशुल्क संचालन गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र बिष्ट आफंै विरामीको सेवामा खटिनु भएको छ । २४ वर्ष सम्म सिनियर अहेवको रुपमा काम गर्नुभएको अध्यक्ष विष्ट बिरामीको सेवामा खटिनु भएको हो ।
सो गाउँपालिकामा महिलाहरुमा पाठेघर खस्ने समस्या धेरै छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकमा प्रेसर, स्वासप्रश्वास, मधुमेह र आखाँको समस्या धेरै हुने गरेको स्वास्थयकर्मीको भनाई छ । निःशुल्क स्वास्य शिविर संञ्चालन भएपछि गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी भएका छन् । सानो तिनो बिरामी भएपनि सदरमुकामका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
निः शुल्क स्वास्थ शिविर प्रत्येक वडामा २ दिन सञ्चालन हुने छ । शिविरमा अहिलेसम्म तीन हजार भन्दा धेरै सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् ।
कपिलवस्तुको तौलिहवा अस्पताल अस्तव्यस्त